Vaovao - Famaritana ny fitsapana hovitrovitra Perkins 1800kW
Famaritana ny fitsapana hovitrovitra Perkins 1800kW
Maotera: Perkins 4016TWG
Hery lehibe: 1800KW
Hafainganana mihodina: 1500 rpm
Fomba famafana motera: vitan'ny rano
1. Rafitra lehibe
Ny takelaka fifandraisana elastika nentim-paharazana dia mampifandray ny motera sy alternator. Ny motera dia raikitra miaraka amina 4 fulcrum sy mpitroka shock 8. Ary ny alternator dia raikitra amin'ny 4 fulcrums sy 4 mpitroka hatairana fingotra.
Na izany aza, amin'izao fotoana izao, ny genset mahazatra, izay mihoatra ny 1000KW ny heriny, dia aza mandray io fomba fametrahana io. Ny ankamaroan'ireo motera sy alternatera ireo dia raikitra amina rohy mafy, ary ireo mpitroka manaitra dia apetraka ao ambanin'ny fototr'ilay genset.
2. Fomba fitsapana hovitrovitra:
Mametraha farantsakely 1-yuan mahitsy eo amin'ny fotony genset alohan'ny hanombohan'ny motera. Ary avy eo manao fitsarana mivantana.
3. Valin'ny fitsapana:
Atombohy ny motera mandra-pahatongany amin'ny hafainganam-pandehany, ary avy eo mandinika sy manoratra ny fipetrahan'ny vola madinika amin'ny alàlan'ny fizotrany rehetra.
Vokatr'izany dia tsy misy famindran-toerana sy fiakarana hitranga amin'ny farantsakely 1-yuan eo amin'ny fotony genset.
Amin'ity indray mitoraka ity dia mitarika hampiasa shock absorber ho fametrahana matevina ny motera sy alternator gensets izay mihoatra ny 1000KW ny heriny. Ny fahamarinan-toerana fototry ny genset matanjaka be izay namboarina sy novokarina tamin'ny alàlan'ny fanakambana ny hamafin'ny fihenjanana CAD, ny fitrohana ny hatairana ary ny fandalinana data hafa dia voaporofo tamin'ny alàlan'ny fitsapana. Ity famolavolana ity dia hamaha tsara ireo olan'ny fihovotrovotra. Izy io dia ahafahana mametraka ny fametrahana ambony sy avo lenta na mampihena ny vidin'ny fametrahana, ary mampihena ny fepetra takian'ny gensets mounting base (toy ny beton). Ankoatr'izay, ny fihenan'ny hovitrovitra dia hampitombo ny faharetan'ny gensets. Ny vokatra mahatalanjona toy izany amin'ny genset mahery vaika dia tsy fahita firy na amin'ny trano na any ivelany.